Home News Madaxweyne Waare oo Galmudug iyo K/Galbeed ku Eedeeyay ka Hor tagis La’aanta...
Madaxweyne Waare oo Galmudug iyo K/Galbeed ku Eedeeyay ka Hor tagis La’aanta Al-shabaab
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay dagaalamayaasha Al-Shabaab ee Hirshabeelle weerarka ku soo qaada inay ka yimaadaan degaanada Koonfur Galbeed iyo Galmudug.
Sidoo kale Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa sheegay in ay xoojiyeen weerarada iyo howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay sii laba jibaaraan taageerada ay siinayaan ciidamada Hirshabeelle ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.
Madaxweyne Waare ayaa xusay in Al-Shabaab keliya looga guuleysan karo in si wadajir ah dagaal loogu qaado degaanada ay Al-Shabaab ku sugan yihiin.
Al-Shabaab ayaa mudooyinkii dambe xoojiyay weerarada ay ka geysanayaan degaanada Hirshabeelle, weerararadaas qaarkood waxaa ku dhintay masuuliyiin ka tirsan Maamulkaasi.
Previous articleWararkii Ugu dambeeyay Qasaaraha ka dhashay Qarax ka dhacay Muqdisho
Next articleFarmaajo oo markii ugu horaysay safarkiisa ku wehlindoonanan Dowlad Goboleedyadda, Sabab?
Shacabka oo dhibaato xoogan ku qabo Waaxda Socdaalka (immigration)